သတင်းတုကို သတင်းစစ်၊ သတင်းမှန်ကနေ ဘယ်လိုခွဲခြားပြောမလဲ – Think Before You TRUST
Home>>ဆောင်းပါး>>သတင်းတုကို သတင်းစစ်၊ သတင်းမှန်ကနေ ဘယ်လိုခွဲခြားပြောမလဲ
တွေးပြီးမှယုံSeptember 20, 2019
လော်ရာ မက္ကလူးစ် ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၂ရက် အင်တာဗျူး
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလထဲမှာ စတန်းဖို့ (ဒ) တက္ကသိုလ် သုတေသီတွေက စိုးရိမ်ဖွယ်ရာ ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်တစ်ခုကို ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့တယ်။ အဲ့ဒါက အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတစ်ဝန်းက ကျောင်းသားအများအပြားဟာ အစီရင်ခံတင်ပြထားတဲ့ သတင်းဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်၊ ဆွဲဆောင်ရေးသားထားတဲ့ သဘောထားအမြင်ဖော်ပြချက်တစ်ခုနဲ့ ကော်ပိုရေးရှင်းကြော်ငြာတစ်ခုတို့ကြားက ကွာခြားချက်ကို မပြောနိုင်ကြဘူးဆိုတဲ့ တွေ့ရှိချက်ဖြစ်တယ်။ ဒီလို မီဒီယာတတ်ကျွမ်းနားလည်မှုကင်းမဲ့ခြင်းကပဲ ငယ်ရွယ်သူတွေအပေါ် တစ်ကယ့်အကျိုးဆက်တွေ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့ “ သတင်းတု” ရဲ့လှည့်ဖျားမှုကို ခံရစရာဖြစ်စေတာပါ။
သင့်ရဲ့ သတင်းစစ်၊ သတင်းမှန်ကို သတင်းတုကနေခွဲခြားပြောနိုင်စွမ်းကို အားကောင်းစေလိုပါသလား။ ဘယ်လိုသတင်းတပုဒ်ပုဒ်ကိုမဆို မေးခွန်းငါးခုမေးမြန်းတာနဲ့စတင်လိုက်ပါ။
-ဒီသတင်းကို ဘယ်သူရေးတာလဲ?- သတင်းစစ်၊ သတင်းမှန်တွေမှာ အမှန်တရားကိုရည်စူးမြုပ်နှံထားတဲ့ အစစ်အမှန် သတင်းသမားတစ်ယောက်ရဲ့ တကယ့်ရေးသူဘယ်သူဆိုတာ ဖော်ပြတဲ့အကြောင်းပါ ပါတယ်။ ( “စပွန်စာပေးဖော်ပြတဲ့အကြောင်းအရာ” နဲ့ အစဉ်အလာကော်ပိုရေးရှင်းကြော်ငြာတွေအပါအဝင်) သတင်းတုမှာကျတော့ အဲဒီအကြောင်းမပါပါဘူး။ ဒီစာကြောင်းကိုတစ်ကြိမ်တစ်ခါတွေ့ရင် သတင်းရေးသူရဲ့ အထ္ထုပ္ပတ္တိကို ကြည့်ပါ။ ဒီလိုလုပ်တာက သင်ဖတ်နေတဲ့ သတင်းဟာ အစီရင်ခံတင်ပြထားတဲ့ သတင်းဆောင်းပါး ( သတင်းပြန်ကြားပေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ သတင်းသမားတစ်ယောက်က ရေးသားထားတာ) တစ်ခုလား၊ ဆွဲဆောင်ရေးသားထားတဲ့ သဘောထားအမြင်ဖော်ပြချက် ( ရှုထောင့်တစ်ခုကနေ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးက ရေးသားထားတာ) တစ်ခုလား၊ ဒါမှမဟုတ် တခြားဟာတခုခုလားဆိုတာ လုံးလုံးလျားလျားခွဲခြားသိမြင်ဖို့ သင့်ကိုအကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။
-ဒီသတင်းကဘာကိုအခိုင်အမာပြောဆိုသလဲ? – ပူလစ်ဇာဆုရ သတင်းဆောင်းပါးတွေလို သတင်းစစ်၊ သတင်းမှန်တွေမှာ အငြင်းပွားစရာ အခိုင်အမာပြောဆိုချက်တစ်ခုကို ဆွေးနွေးတင်ပြတဲ့အခါ အဓိကကျတဲ့ သတင်းရင်းမြစ်ပေါင်းစုံ ပါဝင်လိမ့်မယ်။ သတင်းတုတွေမှာကတော့ သတင်းရင်းမြစ်အတုတွေ၊ ယူအာအယ်(လ) (Urls) အတုတွေနဲ့ ဒါမှမဟုတ် စစ်စစ်ပေါက်ပေါက်သုတေသနပြုတဲ့အခါ သက်သေအခိုင်အမာ မပြနိုင်တဲ့ “ သမားရိုးကျမဟုတ်တဲ့ အခြားအချက်အလက်တွေ” ပါဝင်နေနိုင်ပါတယ်။ သံသယဖြစ်စရာရှိတဲ့အခါမှာ ဒီ့ထက်နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း တူးဖော်ကြည့်ပါ။ အချက်အလက်တွေကို မှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုနိုင်ပါတယ်။
-ဒီသတင်းကိုဘယ်တုန်းကပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့တာလဲ- ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေတဲ့နေ့စွဲကိုကြည့်ပါ။ တကယ်လို့ဒါဟာ စက်ရပ် သတင်းဖြစ်နေရင် အထူးသတိထားပါ။ စက်ရပ်သတင်းကို အဓိပ္ပါယ်ဖော်ဖို့ ဒီလမ်းညွှန်စာရွက်ကို အသုံးပြုပါ။
-ဒီသတင်းကို ဘယ်မှာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့တာလဲ? – သတင်းစစ်၊ သတင်းမှန်တွေကို BBC, NPR, Pro Publica, Mother Jones နဲ့ Wired တို့လို ခိုင်မာတဲ့အချက်အလက်စစ်ဆေးမှုမှတ်တမ်းရှိတဲ့ ယုံကြည်လောက်စရာမီဒီယာထုတ်ဝေရေးတွေက ထုတ်ဝေဖြန့်ချီကြတာပါ။ (မီဒီယာထုတ်ဝေရေးတခုခုနဲ့ပတ်သတ်လို့ ပိုမိုသိချင်ရင် သူတို့အကြောင်းစာမျက်နှာ ( About Page ) မှာကြည့်ပြီး သူတို့ရဲ့ထုတ်ဝေရေးအဖွဲ့ကို စစ်ဆေးကြည့်ရှုပါ) တကယ်လို့ သင့်ရဲ့သတင်းကို အဓိကအားဖြင့် ဆိုရှယ်မီဒီယာကနေရတာဆိုရင် ဒီသတင်းကိုမရှယ်ခင်မှာ သတင်းအချက်အလက်တိကျမှန်ကန်ရဲ့လားဆိုတာ အတည်ပြုဖို့ကြိုးစားပါ။ (ဥပမာပြရရင် တွစ်တာပေါ်မှာ လင့်(ခ) တစ်ခုကို မရှယ်ခင် ထုတ်ဝေရေးရင်းမြစ်တစ်ခုကို ထပ်ဆင့်စစ်ဆေးဖို့ မီဒီယာထုတ်ဝေရေး အမည်တစ်ခုရဲ့နောက်က အပြာရောင် “ မှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုပြီး” အမှတ်အသားကိုရှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။
-ဒီသတင်းအပေါ်သင်ဘယ်လိုခံစားမိလဲ? – ဝါဒဖြန့်ချီချက်အားလုံးလိုပဲ သတင်းတုကို သင့်မှာပြင်းပြတဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားမှုခံစားလာရအောင် စီစဉ်ရေးဆွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် တကယ်လို့သင့်ကို ဒေါသတကြီးခံစားရအောင် လုပ်ထားတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကို ဖတ်မိခဲ့တယ်ဆိုရင် ခဏလောက်ဖတ်တာကိုရပ်ပြီး အသက်ကိုပြင်းပြင်းရှူသွင်းလိုက်ပါ။ ပြီးတော့မှ အထက်မှာ စာရင်းတို့ပြခဲ့တဲ့ မီဒီယာထုတ်ဝေရေးသုံးခုမှာပါတဲ့ သတင်းနဲ့ တိုက်ဆိုင်နှိုင်းယှဉ်ပြီး ဒီသတင်းတွေရဲ့ အခိုင်အမာပြောဆိုချက်တွေကို ထပ်ဆင့်စစ်ဆေးပါ။
ပြီးရင် ဒီသတင်းပုဒ်ဟာ သတင်းစစ်၊ သတင်းမှန်လား ဒါမှမဟုတ် သတင်းတုလားဆိုတာ သင့်ဘာသာဆုံးဖြတ်ပါ။ အောက်ခြေမှတ်စု- သင်ဖတ်ရသည်တိုင်းကို မယုံကြည်ပါနဲ့။ ဒီနေရာမှာဝေဖန်ပိုင်းခြားတွေးမြင်မှုအတွက် အစားထိုးစရာဘာမှမရှိပါဘူး။
တကယ်လို့ သတင်းဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကို သင်ဖတ်တဲ့အခါတိုင်း ဒီမေးခွန်းငါးခုလုံးကိုမေးတတ်တဲ့ အလေ့အထသင်ရထားပြီးဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့အခြေခံသတင်း သိမြင်တတ်မြောက်မှုစွမ်းရည်ဟာ ပိုမိုအားကောင်းတိုးတက် ရင့်ကျက်စပြုလာပါပြီ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတွေဟာ အခြေခံမျှသာဖြစ်ပါတယ်။ သတင်းနဲ့မီဒီယာနားလည်တတ်မြောက်မှုနယ်ပယ်အတွင်းကို ပိုမိုနက်ရှိုင်းအောင်ထိုးဝင်ဖို့ဆိုရင်တော့ TED- Ed Lesson – သင့်အတွက်သတင်းဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲဆိုတဲ့ အစီအစဉ်ကိုစောင့်ကြည့်ပါ။ ကျောင်းသားတွေမှာဘာတွေလိုအပ်နေသလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ ပိုပြီးရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့ကတော့ ဒီမှာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေထားတဲ့ စတန်းဖို့ (ဒ) တက္ကသိုလ် အစီရင်ခံစာကိုဖတ်ပါ။
လော်ရာ မက္ကလူး ( Lawra Me Clure) ဟာ ဆုရသတင်းသမားတစ်ဦးဖြစ်ပြီး TED- Ed ရဲ့အယ်ဒီတာတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အပတ်စဉ်တိုင်းအသစ်တစ်ခုခုကို သိရဖို့အတွက် TED- Ed သတင်းစာစောင်ကို ဒီနေရာမှာဝင်ရောက်မှာယူပါ။